कार्टुन Archives - Asian Samachar
टाउकोमा टुटुल्को… बुधबार, कार्तिक ३, २०७३0responses आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको रबि मिश्रको कार्टुन ।
चिनियाँ रेल चाहिँदैन, पर्यावरण विनाश गर्न पाइँदैन शनिबार, अशोज १५, २०७३0responses चीनबाट रेल आयो भने पर्यावरण खत्तमै हुन्छ । वनजंगल स्वाहा हुन्छ । चीनबाट आउने रेलले चिसो ल्याउँछ, हिउँ ल्याउँछ । ल हेर्नूस् त, ‘चीन र चिसो’ शब्द पनि उस्तैउस्तै छ । हिउँ नै हिउँको बाटोबाट आएको रेलले ल्याएको चिसोबाट बच्न के गर्ने त ? जनतालाई हिटर बाँडौँ भने बिजुली...
टिकट कताको ? स्वर्गको की नर्कको ? बुधबार, अशोज १२, २०७३0responses
आजको कार्टुन शनिबार, अशोज ८, २०७३0responses
छक्का-पन्जा हेर्न सिनेमा हलनै किन जानु पर्यो ? टिभीमै दिइराछ त ! आइतवार, अशोज २, २०७३0responses
झटारो- गफ दिनलाइ यिनी पनि कम छैनन् शनिबार, भदौ २५, २०७३0responses झटारो- गफ दिनलाइ यिनी पनि कम छैनन्
कार्टुन- ओलीमाथि प्रचण्डको झटारो आइतवार, साउन ३०, २०७३0responses
झटारो – प्रधानमन्त्री ओलीसँग संक्षिप्त वार्ता आइतवार, साउन १६, २०७३0responses झटारो – प्रधानमन्त्री ओलीसँग संक्षिप्त वार्ता पत्रकार — अब कहिले बालुवाटार छोड्नुहुन्छ ? प्रम — छोडेकै सम्झनुस् न! म त नाफाको जीन्दगी बाँचिराको मान्छे, मलाई कुनै कुराको मोह छैन । पत्रकार — यस्तो फक्कड जोगी जस्तालाई पनि कुर्सीबाट हटाए त ! प्रम — यो त दिनदशा लागेर हो। भन्छन् नि...
कार्टुन – भ्रष्टाचारी बुधबार, साउन १२, २०७३0responses
कार्टुन – झटारो बुधबार, साउन १२, २०७३0responses